I-Atom Inkcazo (i-Chemistry Glossary)
I-Glossary Glossary Inkcazo yeAtom
I-athomu yisakhiwo esichaza isakhi , esingenakuphulwa nayiphi na indlela yamachiza. I -athomu eqhelekileyo inomxholo weeproton ezixhasayo ngokufanelekileyo kunye neetronitri ezingathathi hlangothi zombane ezinee - electron ezixhatshazwayo ezingekho phantsi kwelo nucleus. Nangona kunjalo, i-athomu ingaba neproton enye (oko kukuthi, i-protium isotope ye-hydrogen ) njengenucleus. Inani leeponononi lichaza ubunikazi be-athomu okanye iqela layo.
Ubungakanani be-athomu buxhomekeke kwiingaphi iiponononi kunye ne-neutron, kunye nokuba ingaba i-electron. Isayizi ye-atom ejikeleze i-picometers eyi-100 okanye malunga neyunithi yeebhiliyoni ezili-10 zemitha. Ininzi yomsindo ayikho indawo, kunye nemimandla apho iifowuni zifumaneka khona. Ama-athomu amancinci atholakala ngokulinganayo, kodwa oku akusoloko ekholelwa kwii-athomu ezinkulu. Ngokuchasene nemininzi yemifanekiso yee-atom, ii-electron azihlali zijikeleza i-nucleus kwiindidi.
Ii-Atom zinokulinganisa ubukhulu ukusuka kwi-1.67 x 10 -27 kg (i-hydrogen) ukuya kwi-4.52 x 10 -25 kg yeenucleuclea ezinkulu zomsakazo. Ubunzima buphantse kubangelwa iiproton kunye ne-neutron, njengoko ii-electron zenza i-atom ubunzima .
I-athomu enenani elilinganayo leeponononi kunye ne-elektronti ayikho inkunkuma yombane. Ukungalingani kwamanani eeprotoni kunye nee-elektronta zenza ion i-athomu. Ngoko ke, i-athomu ingathathi hlangothi, ilungile, okanye ayibi.
Ingcamango enokuthi yenziwe ngamacandelo amancinci sele ijikeleze ukususela eGrisi naseIndiya yakudala.
Enyanisweni, igama elithi "i-athomu" lenziwe kwiGrisi lasendulo. Nangona kunjalo, ubukho bama-athomu abuzange buqinisekiswe kude kufike uvavanyo lukaJohn Dalton ekuqaleni kwe-1800. Ngekhulu lama-20, kwaba lula "ukubona" ​​i-athomu nganye usebenzisa i-scanning microscopy.
Nangona kukholwa ukuba iifowuni zakhiwe kwiimpawu zokuqala ze-Big Bang ukwakheka kwendalo yonke, i-nuclei ye-athomu ayizange ibe yimizuzu emithathu emva kokuqhuma.
Okwangoku, uhlobo oluqhelekileyo lwe-athomu kwindalo yonke i-hydrogen, nangona ngokuhamba kwexesha, izabelo ezikhulayo ze-helium kunye ne-oksijeni ziya kuba khona, mhlawumbi zifumana i-hydrogen ngobuninzi.
Ininzi yenkalo edibeneyo kwindalo yendalo iyenziwa kwii-athomu eneeponononi ezintle, i-neutrons engathathi hlangothi, kunye nee-electron ezimbi. Nangona kunjalo, kukho inxalenye ye-antimatter yama-electrons kunye neeponononi kunye neentlawulo zombane. Ii-positron zi-electron ezilungileyo, ngelixa iiproproprots ziyi-proton ezimbi. Iingqungquthela, i- atomatter i-atomatter ikhona okanye ingenziwa. I-antimatter efana ne -athomu ye-hydrogen (i-antihydrogen) yaveliswa kwi-CERN eGeneva ngowama-1996. Ukuba i-athomu rhoqo kunye ne-anti-atom beza kuhlangana, baya kutshabalalisa, ngelixa bekhulula amandla amakhulu.
Iim athomu ezingaphandle ziyakwenzeka, apho iproton, i-neutron, okanye i-electron ithathelwa enye inxalenye. Ngokomzekelo, i-electron ingathatyathwa endaweni ye-muon ukwenza i-athomu ye-muoinic. Ezi ntlobo zee-atom azizange zibonwe kwindalo, kodwa ingaveliswa kwibhubhoratri.
Imizekelo yee atom ibandakanya :
I-Cl - (into inokuba yinto ye-athomu kunye ne- isotope okanye ion ngexesha elinye)
Imizekelo yezinto ezingekho i-atom ziquka amanzi (H 2 O), ityuwa yetyuwa (NaCl), kunye ne-ozone (O 3 ). Ngokwenene, nayiphina impahla enomxholo obandakanya uphawu olungaphezulu kweyodwa okanye ene-subscript elandelayo isimboli yelungu i-molecule okanye ihlanganisi kwaye ayikho i-athomu.
Inombolo yeNombolo Inkcazo kunye nemizekelo
Ukubuyiswa koMmandla Ingcaciso
Inkcazo yeHarogenated Hydrocarbon Definition
I-Electron Ukunyaniseka kwengcaciso
I-Intrinsic Property Definition (iKhemistry)
Ukunciphisa Inkcazo kunye noMzekelo kwiKhemistry
Inkcazo yexesha eliqhelekileyo Inkcazo
Iftar: I-Daily Break-Fast In Ramadan
Yintoni i-Checker Grammar?
UYuda Iskariyoti - Umthengisi kaYesu Kristu
I-Juvenal - Roman Satirist
I-100 yezona ziqhelo eziqhelekileyo zeKagji
Unqwenela ukuba iMfazwe yeMfazwe yiNtsuku yoLutsha lweNtsapho
Ukuguqulwa kwamatye amatye-ngaphaya kweModeti yeLithic yakwaGrahame Clark
Iingcaphuno ezivela ekubulaleni i-Mockingbird
Amathuba emisebenzi emva kweSikolo soBugcisa
I-Major League Baseball Announcers
Indlela yokwenza iBattery yeZithelo
I-SLIders ne-Streetlight Phenomenon
Biography kaBernardo O'Higgins
Indlela abaKhokeli beSikolo abanokukunceda ngayo ukuphucula umgangatho wootitshala